Inona marina no ilain'ny hardware China?
Tokony ho fantatsika hoe iza ny Hardware hardware China Alliance, karazana sivilizasiona ara-barotra ilaintsika, ary karazana tontolo tokony hamoronana antsika. Fotoana nahafinaritra sy fotoan-tsarotra io. Betsaka amin'ny ozinantsika no mbola miezaka mampiasa asa mora mba hahazoana sitraka amin'ireo mpividy iraisam-pirenena, fa ny tombony azo avy amin'ny laboratoara ...
Fomba iray mahomby hanatsarana ny kalitaon'ny vy maty vy any Shina
Ny vy vita amin'ny metaly dia iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny famokarana bobongolo. Eo ambanin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny bobongolo, ny indostrian'ny vy bobongolo eran'izao tontolo izao dia mivoatra haingana, fa ny kalitaon'ny vy bobongolo ao Shina dia tsy afaka mahafeno ny fepetra takian'ny vy, ka ny indostrian'ny vy vita amin'ny lasitra China dia tokony hihatsara ...
Nanjary tsindry hazo lena eran-tany i Sina tamin'ny fanodinana fitaovana sy fanondranana entana
Indostrian'ny fampitaovana ao Shina tato anatin'ny taona vitsivitsy, novolavolain'ny alàlan'ny làlambe nentim-paharazana ho lasa tanàna elektromekanika maoderina. Taorian'ny andiam-panovana lalina, ny tsenan'ny fitaovana haingon-trano ankehitriny dia nanolotra fironana fampandrosoana lehibe maro. Ny voalohany dia ny mizana. CHINE ...
<< < 1 2 3 4 5 Manaraka >> Page / 5